Le Mans Hypercar ရဲ့ အင်ဂျင်ကို စွမ်းအင်မြှင့်တင် ပေးလိုက်ပြန်တဲ့ Toyota! – MyMedia Myanmar
Le Mans Hypercar ရဲ့ အင်ဂျင်ကို စွမ်းအင်မြှင့်တင် ပေးလိုက်ပြန်တဲ့ Toyota!
အခုဆိုရင်တော့ နှစ်သစ်တစ်နှစ် ဖြစ်တဲ့ ၂၀၂၁ ကို စတင် ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပြီး ကားပြိုင်ပွဲ ရာသီ အသစ်တွေကလည်း တစ်ဖန်ပြန် လည် စောင့်ကြိုနေခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်ထိကို ဆက်လက် ဖြစ်ပွားနေဆဲ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့် ဘယ်လိုအခြေအနေ ဖြစ် မလဲဆိုတာ မသိရသေးပေမယ့် ပြိုင်ပွဲအတွက် အများစုကတော့ အဆင်သင့်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေကြပါပြီ။ ဒါကြောင့် Toyota အနေနဲ့ လည်း သူတို့ရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ ‌အကောင်းဆုံးသော ပြိုင်ကားတစ်စီးဖြစ်တဲ့ Le Mans Hypercar ကို စတင်ဖို့ အရှိန်မြှင့်နေပြီ ဖြစ်ပါ တယ်။ ဂျပန်ကားကုမ္ပဏီ အနေနဲ့ လက်ရှိမှာ အင်ဂျင် အပိုင်းကို ထုတ်ဖော်ပြောကြထားတာမျိုး မရှိသေးပေမယ့်လည်း ယခင်တုန်း က ၂၀၁၈ မှာ Road Going Version အဖြစ်ချပြခဲ့တဲ့ Toyota GR Super Sport Concept အရဆိုရင်တော့ Mid Mounted 2.4 Liter Twin-Turbo V6ကို တပ်ဆင် ထားတာပဲ ဖြစ်လို့ အခု ကားအသစ်မှာလည်း အလားတူ အနေအထားပဲ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကားရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်အရတော့ အမြင့်ဆုံးအနေနဲ့ 600 hp ( 447.4 kW ) အထိ ရှိလာနိုင်ကာ Le Mans Hypercar ရဲ့ စည်းမျဉ်းတွေအရတော့ 671 hp ( 500.3 kW ) အထိ ရှိတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အခု စည်းကမ်းတွေထဲက အခြားသော စိန်ခေါ်မှု တစ်ရပ်ကတော့ အဆိုပါ ပြိုင်ကားရဲ့ Road Going Version ကို အနည်းဆုံး အစီး ၂၀ အထိ ရအောင် တည်ဆောက်ရမယ် ဆိုတာ ပါပဲ။ ဒီလို အနေအထား တွေကြောင့်လည်း တကယ့်ကို ထူခြားကောင်းမွန်တဲ့ ယာဉ် အမျိုး အစားတွေ ဖြစ်တဲ့ Mercedes Benz CLK GTR နဲ့ Porsche GT 1 တို့ အပြင် GR Super Sport ကားတို့ကိုပါ လမ်းမ‌ထက်ကို ပို့ဆောင် ပေးနိုင်ခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တမ်း ပြောရမယ် ဆိုရင်တော့ အဆိုပါ ကားတွေရဲ့ မျိုးဆက်သစ်တွေဟာ ပြိုင်ပွဲအတွင်း စွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းတွေ ကိုလည်း ပေးစွမ်းလာ နိုင်သလို အသင်းငယ်လေးတွေ အတွက်လည်း ကုန်ကျစရိတ် နည်းပါး လာနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲရဲ့ Premier Endurance Racing Series မှာ ဆိုရင် ထုတ်လုပ်တဲ့ သူတွေလည်း ပိုမို များပြားလာခဲ့သလို နောက်ဆုံးမှာလည်း တကယ့်ကို ထိပ်တန်း ၃ ဖွဲ့ ဖြစ်တဲ့ Porsche ၊ Audi နဲ့ Toyota တို့ ရဲ့ Le Mans အပေါ် လွှမ်းမိုးလာနိုင်မှုကိုလည်း ဆက်လက်တွေ့မြင်ရဦးမှာပါ။ ဘာ‌ပဲပြောပြော အခု အနေ အထား အတိုင်းဆိုရင် ဂျပန် ကားကုမ္ပဏီ Toyota ဟာ တကယ့်ကိုယုံကြည်မှု ရှိရှိနဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတာ ကြောင့် သေချာ လေး စောင့်ကြည့်ရမှာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ် ရရှိထားတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေ အရတော့ Toyota ဟာ သူတို့ရဲ့ Hypercar Racer ပြိုင်ကားကို စတင်စမ်းသပ်မှု တွေ ပြုလုပ်နေခဲ့ပြီ ဖြစ်ပြီး Paul Ricard Race Circuit မှာ မောင်းနှင်နေခဲ့တာ ဖြစ်ကာ ‌ကြီးကြီးမားမား အောင်မြင်ထားခဲ့တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကံ‌မကောင်းတာတစ်ခုက T S050 Storybook ရဲ့ အဆုံးသတ်ကို မမြင်တွေ့ ရနိုင်ပေမယ့် အခုလိုမျိုး ခက်ခဲ ကြမ်းတမ်းတဲ့ Endurance Racing ပြိုင်ပွဲ အနာဂါတ်ကတော့ မယုံနိုင်လောက်စရာ ကောင်းအောင် စိတ်လှုပ်ရှားနေရပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
The post Le Mans Hypercar ရဲ့ အင်ဂျင်ကို စွမ်းအင်မြှင့်တင် ပေးလိုက်ပြန်တဲ့ Toyota! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-11T19:00:29+06:30January 11th, 2021|MYCARS MYANMAR|